Macaanka Nooca 1aad Gaaldiid
Bogga Hore > Causes > Macaanka Nooca 1aad
Macaana Nooca 1aad
Insulin waa hormoon isu dheeli tira sonkorta dhiiga ku jirta. Hadii qofku uu qabo xanuunka Macaanka gaar ahaan Nooca 1aad (Type 1) waxa jirku joojinayaa soo daynta Insulin, waxayna sababaysaa in sonkor badan ku hadho dhiiga. La’aanta Insulin waxay keenaysaa xanuun halis ah sidaa awgeed waa in uu qofku qaadaa Insulin dheeraad ah maalin kasta.
Macaanku waxa uu ukala baxaa noocyo kala duwan. Nooca 1aad (Type 1) waxa uu inta badan ku dhacaa caruurta, sidaa awgeed waxa loo yaqaan “Macaanka Caruurta”. Xanuunkan lama dawayn karo, laakiin hadii aad hesho dawo fiican waad la noolaan kartaa nolol aad u fiican.
Calaamadaha Macaanka Nooca 1aad.
Acetone ka urta afka.
Aragtida oo daciifta.
Miisaanka oo hoos u dhaca si degdeg ah.
Haddaad leedhay Nooca 1aad ee Macaanka waa inaad qaadataa Insulin maalin kasta, sidoo kale waxa muhiima inaad markasta cabirto heerka sonkarta ee dhiiga.
Maxaa jirka ku dhacaya?
Macaanku waa eray guud oo cuduro kala duwan leeyihiin, waxayna xanuunadaasi wadaagaan in qofka jirkiisa uu ku badato sonkortu, glucos, sidaa awgeed xanuunka waxa loogu yeeri jiray xanuunka sonkorta.
Nooca 1aad ee Macaanka waxa inta badan uu ku dhacaa caruurta u dhaxaysa 10 ilaa 14 sano jir, sidoo kale wuu ku dhici karaa caruur kasii yar da’daa, sidoo kale dadka waawayna wuu ku dhici karaa inkastoo dadka waawayni ay u badanyihii Nooca 2aad Macaan.
Haweenka uurka leh waxay u fududyihiin in uu ku dhaco xanuunka Macaanka Nooca 2aad, sidaa awgeed waxay u baahanyihiin daawayn taxadar leh inta ay uurka leeyihiin. Inta badan markay umulaan dhiiga sonokortu caadi ayuu kusoo noqdaa.
LADA, Latent Autoimmune Diabetes of the Adult waa nooc kale oo ka mid ah Macaanka. Sababtuna waa insulinta uu oo aad u yar.
Insulin waxay muhiim u tahay unugyada jirka, si ay unugyada iyo xubnaha jirku u gutaan hawshooda waxay u baahanyihiin shiidaal (tamar). Tamarta waxa lagu qaadaa dhiiga jirka, gaar ahaan qaab glukos ah. Si sonkorta loogu gudbiyo unugyada jirka waxay u baahanyihiin hormoonka insulin oo laga soo daayo ganaca gaar ahaan marka ruuxu cunto cunayo.
Hadii uu yaryahay dheecaanka hormoonka insulin waxa jirka ku badanaya sonkorta, unugyada jirkuna ma helayaan tamar, sidaa awgeed qofku waxa uu dareemayaa daal badan.
Intee in le’eg oo sonkora ayaa jirkaaga ku jira waxa lagu qiyaasaa adigoo iska qaada dhiiga sonkorta oo cabira heerka sonkorta ee ku jirta dhiiga. Sonkorta siyaadada ah waxa lagu kaydiyaa beerka iyo murqaha qaabka glycogen si loo adeegsado xilliga loo bahanyahay tamar dheeraad ah.
Jirka oo joojiya soo saarka hormoonka insulin.
Nooca 1aad ee macaanku waxa uu sababaa in unugyada betaceller ee ganacu joojiyaan soo saarka insulin. Insulinta yaraatay awgeed waxa badanaaya sonkorta ku hadhaysa dhiiga, sidoo kale unugyada jirku ma helayaanwax tamar ah sidaa awgeed waxay isticmaalayaan tamartii ku kaydsanayd jirka taasina waxay keenaysaa in ruuxa miisaankiisu hoos u dhaco.
Nooca 1aad waxa keeni karaa dhaxal:-
Macaanka Nooca 1aad waa xanuun la kala dhaxlo, Ruuxu waxa uu dhaxlayaa ganaciisa oo aan soo saarayn insulin. 100 kiiba laba qof ayaa waalidkood ka dhaxli kara xanuunka. Aabahu haduu qabo xanuunka macaanka waxa laba jibaar maya halista uu ubadkiisu ku qaadi karo macaanka.